U bood Goo Editor: Samee Jump jarid in Click ah
> Resource > Video > Sida loo dalbado jarid Jump in Click ah
Cut Jump waxaa loola jeedaa kala guurka ah kadis ah mid ka mid ah goobta si kale, abuurista saamayn ah soconin ama dardargelinta. Waxaa jira jeexan boodi aad u xunna kaalinta badan, ugu video Gangnam Style waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican oo badan oo loo isticmaalo farsamadan. Haddii aad sidoo kale doonayaan in ay shaqaaleeyaan boodi jaray si loo xakameeyo caadifadaha iyo fikradaha, sidaasay u ah habka ugu wanaagsan ee debedda loogu soo story in si gaar ah la sameeyo, buugan adiga kugu habboon tahay.
Si aad u jeexan boodi ee lacankii clip ah, isticmaalin, anfacaya qalab: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Barnaamijkan wuxuu ku siinayaa awood ay ku dalban jeexan boodaan si ay u doonayso in aad video clip in click ah. Intaas waxaa sii dheer, waxa kuu ogolaanayaa inaad u astaysto oo dhererkeedu waqti iyo ciyaaro muddo si ay u siman sida badan ee suurtogalka ah. Hoos yimaado hago tallaabo-tallaabo, fududahay in qof walba si aad u bilowdo, xitaa aadan lahayn asalka filimka.
Riix Import in lagu daro aad videos to this boodi jaray video editor. Waxaad ku dari kartaa files badan waqti isku mid ah. Intaa waxaa dheer, in aad uga takhalusi karaan faylasha loo baahnayn la "Clear oo dhan" ama "Delete" button. Marka aad ku shuban files ee maktabadda Warbaahinta, kuwaa oo ku Timeline Video ah.
2 Codso cut boodi in click ah
Midig u guji video clip ah oo ku saabsan Timeline iyo dooro "Power Tool". Daaqadda muuqata, guji "jeexan boodi ee Beats" hoos. Markaas hubi "Codso cut boodi ee Beats in clip ah".
Play hadda waxa, ma aad arki boodi lahaa? Waa inaad taxadar in ay ku boodi lahaa. Oo waa inaad u dhaqaaqi karaan bar slide ee "dhererka Jump Time" si ay u kala jebin yar oo dheeraad ah, ama qabsato "Play duration" si uu muuqaal kasta ciyaaro muddo.
Talooyin: Inta aadan itusi boodi cut, waxaad samayn kartaa kala video clips galay yaryar hore. Sidaas, waxaad u qeexi karaan jeexan boodi kala duwan dhowr clips si uu u wanaajiyo haboon story in.
2 Ehance aad video la saamaynta gaar ah (optional)
Ka dib marka aad ku dhameysan boodi tafatirka dhimo, sidoo kale waxaad codsan kartaa qaar ka mid ah saamaynta gaar ah loo qaato video heerka ku xiga. Guji "Saamaynta" tab ee toolbar ah, oo ka dibna soo qaado mid aad jeceshahay ka 70+ arrimo cabsi badan si aad u dalbato.
4 badbaadi abuurkiinna
Hadda si fudud guji "Abuur" dhammayn shaqadaada. In uu furmo suuqa wax soo saarka, xulo qaab video ah si loo badbaadiyo on your computer, ama si toos ah wadaagaan in YouTube, Facebook, iwm
Sida loo baaqiga jir ah
Sida loo Beddelaan Streaming Video in MP3?
Sida loo Edit 3GP / 3GP2 Video Faylal ay ku Mac / Windows